Sales Supervisor – Van Sales | First Star Company Limited ﻿
6.12.2019, Full time , Export / Import / Trading
Company: First Star Company Limited
Selecting the high quality products and delivering to our customer with the best service is our mission for healthy substantial growth of company.
To import the best quality product from global market
To becomeavaluable and differential distributor in the market
The strategic grow of company will be adjunct to prosperity of our staffs and also to more contribution to the society.First Star Co.,Ltd သည် ယခုထက်ပိုမိုအောင်မြင်သော ဈေးကွက်ဝေစု ရရှိနိုင်ရန်အတွက် ကျွမ်းကျင်ပြီး အတွေ့အကြုံရှိသော ၀န်ထမ်းများ ၊ မိမိကိုယ်တိုင် စိန်ခေါ်မှုကိုကြိုက်နှစ်သက်ကာ အောင်မြင်မှုကို ရှာဖွေချင်သော တတ်ကြွပြီး ကြိုးစားလိုစိတ်ရှိသည့်လူငယ်များ ၊ ကုမ္ပဏီနှင့်အတူ အတူတကွလက်တွဲ၍ အောင်မြင်မှုကို အတူတကွ မျှဝေပြီး ကြိုးစားလုပ်ကိုင်လိုသည့် ၀န်ထမ်းများအားရှာဖွေလျက်ရှိပါတယ်။First Star Co.,Ltd သည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှစတင်ကာ အလှအအပနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အထောက်အကူပြု ဆေးဝါးများ ၊ အစားသောက်များကို အရည်သွေးကောင်းများစွာထုတ်လုပ်နေသော နိုင်ငံတကာထုတ်လုပ်ရောင်းချသူများထံမှ ၀ယ်ယူတင်သွင်း၍ ကိုယ်တိုင်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချလျှက်ရှိသော ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါသည် ။ မြန်မာနိုင်ငံရှိ မြို့ကြီး (၁၂) မြို့တွင် အရောင်းကိုယ်စားလှယ်များထားရှိကာ မြန်မာနိုင်ငံ တစ်ဝှမ်းလုံးသို့ ၀န်ထမ်းအင်အားစုစုပေါင်း ၁၀၀ ခန့်ဖြင့် ဖြန့်ဖြူးရောင်းချလျှက် ရှိပါသည် ။ နှစ်အနည်းငယ်တွင်းမှာပင် သက်ဆိုင်ရာဈေးကွက်အတွင်း လျင်မြန်စွာ ၀င်ရောက်၍ အောင်မြင်စွာဖြန့်ဖြူးရောင်းချနိုင်သော ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
•	တာဝန်ယူမှု၊တာဝန်ခံမှုဖြင့်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီး၊Team Managementကိုကောင်းစွာစီမံနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
•	Supervisor လုပ်သက်အတွေ့အကြုံ၂နှစ်ရှိသူဖြစ်ရမည်။
•	Pharmacy Fieldအတွေ့အကြုံရှိသူဖြစ်ရမည်။
Work location အမှတ် ၈၅၊ ဇေယျသုခလမ်း၊ သုဝဏ္ဏ၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်
Company Industry: Sales Supervisor – Van Sales
6 Days, Full time , Export / Import / Trading
Mission Selecting the high quality products and delivering to our customer with the best service is our mission for healthy substantial growth of company. Vision To import the best quality product from global market To becomeavaluable and differential distributor in the market The strategic grow of company will be adjunct to prosperity of our staffs and also to more contribution to the society.
First Star Co.,Ltd သည် ယခုထက်ပိုမိုအောင်မြင်သော ဈေးကွက်ဝေစု ရရှိနိုင်ရန်အတွက် ကျွမ်းကျင်ပြီး အတွေ့အကြုံရှိသော ၀န်ထမ်းများ ၊ မိမိကိုယ်တိုင် စိန်ခေါ်မှုကိုကြိုက်နှစ်သက်ကာ အောင်မြင်မှုကို ရှာဖွေချင်သော တတ်ကြွပြီး ကြိုးစားလိုစိတ်ရှိသည့်လူငယ်များ ၊ ကုမ္ပဏီနှင့်အတူ အတူတကွလက်တွဲ၍ အောင်မြင်မှုကို အတူတကွ မျှဝေပြီး ကြိုးစားလုပ်ကိုင်လိုသည့် ၀န်ထမ်းများအားရှာဖွေလျက်ရှိပါတယ်။
First Star Co.,Ltd သည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှစတင်ကာ အလှအအပနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အထောက်အကူပြု ဆေးဝါးများ ၊ အစားသောက်များကို အရည်သွေးကောင်းများစွာထုတ်လုပ်နေသော နိုင်ငံတကာထုတ်လုပ်ရောင်းချသူများထံမှ ၀ယ်ယူတင်သွင်း၍ ကိုယ်တိုင်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချလျှက်ရှိသော ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါသည် ။ မြန်မာနိုင်ငံရှိ မြို့ကြီး (၁၂) မြို့တွင် အရောင်းကိုယ်စားလှယ်များထားရှိကာ မြန်မာနိုင်ငံ တစ်ဝှမ်းလုံးသို့ ၀န်ထမ်းအင်အားစုစုပေါင်း ၁၀၀ ခန့်ဖြင့် ဖြန့်ဖြူးရောင်းချလျှက် ရှိပါသည် ။ နှစ်အနည်းငယ်တွင်းမှာပင် သက်ဆိုင်ရာဈေးကွက်အတွင်း လျင်မြန်စွာ ၀င်ရောက်၍ အောင်မြင်စွာဖြန့်ဖြူးရောင်းချနိုင်သော ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
•	တာဝန်ယူမှု၊တာဝန်ခံမှုဖြင့်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီး၊Team Managementကိုကောင်းစွာစီမံနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
Sales Supervisor – Van Sales Sales & Marketing Jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Jobsinyangon First Star Company Limited Sales & Marketing Jobs Sales & Marketing Jobs Sales Supervisor – Van Sales Jobs in Myanmar, jobs in Yangon
Sales Manager (DIA) M/F (3)